DF oo farriin u dirtay Soomaalida ku sugan Ukraine | KEYDMEDIA ENGLISH
DF oo farriin u dirtay Soomaalida ku sugan Ukraine
Wasaaradda Arimaha Dibadda, waxa ay xaqiijisay in Soomaaliya wakiillo rasmi ah u diri doonto muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dagaalladu ku qabsadeen Ukraine.
UKRAINE – War ka soo baxay Wasaaradda Arimaha Dibadda Soomaaliya, ayaa lagu wargaliyay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Ukraine in waddamada xudduudka la leh dalkaas, ee kala ah; Poland, Slovakia, Hungry, Moldova, iyo Romania ay dhammaan muwaadiniinta siin doonaan marin ammaan ah iyo adeegso soo dhaweyn.
Warbixinta xaaladda Muwaadiniinta Soomaaliyeed ku sugan Ukraine, ayay DF, ku sheegtay in Safaaradaha Beljimka iyo Berlin, ay si joogto xiriir ula leeyihiin 280 qof oo Soomaali ah, kuwaas oo qoorkood si nabad ah ku gaaray Poland, kuwana hadda ku sii socdaan, iyo kuwa kale oo aan awoodin inay ka gudbaan xuduudaha Medyka-Shehyni iyo Budomierz-Hrushiv.
Wasaaradda Arimaha Dibadda, waxaa ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan awoodin inay ka gudbaan xadka sababo la xariira dukumentiyada aqoonsiga, ku wargalisay in ay la xariiraan Safaaradaha Soomaaliya ee Biljimka iyo Jarmalka, si loogu sameeyo aqoonsiyo qunsuliyadeed oo ay ku gaaran dalalka ay naftooda ula baxsanayaan.
Waxaan ka codsaneynaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan haysan warqadaha aqoonsiga inay la soo xiriiraan safaaradaha aan ku leenahay Biljimka iyo Jarmalka. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Dowladda Federaalka.
Wasaaradda Arimaha Dibadda, waxa ay xaqiijisay in Soomaaliya wakiillo rasmi ah u diri doonto muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dagaalladu ku qabsadeen Ukraine, si ay u helaan kaararka aqoonsiga ee saxda ah si ay uga gudbaan xudduudaha.
Dowladda Soomaaliya, ayaa sidoo kale, wadamada deriska la ah Ukraine, ugu baaqday inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadantinimada iyo inay siiyaan marin furan dhammaan Afrikaanka ka soo gudbaya xadka dalka Ukraine.
Is-aragga koobaad ee wadahadallo heer sare ah oo u dhexeeyay Kyiv iyo Moscow ayaa ku dhamaaday heshiis la’aan, marka laga reebo in la sii wadahadlo. Dhimashada dadka rayidka ah ayaa hadda maraysa 352 qof, oo ay ku jiraan 14 carruur ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Ukraine.
In ka badan 520,000 oo qof ayaa ka qaxay Ukraine tan iyo markii uu Ruushka bilaabay duulaanka, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, halka, The Kyiv Independent, soo tebisay seeriga duullaanka cirka ee Kyiv, Kharkiv iyo magaalooyin kale, oo ay ku jiraan Vinnytsia, Uman iyo Cherkasy.
Xiriirka safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Berlin:
Mohammed Abdi Kulmie
Number: +49 176 704 59 491.
Xiriirka safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Brussels:
Omar Mohamud Wardere
Number: +32 466 227 727.